Vaovao - manomboka manangana tranobe vaovao sy tranobe
Sichuan XiangYue mpiorina tsipika herinaratra Cop. (XY Tower) dia natsangana tamin'ny 2008. Amin'ny ezaky ny zavatra rehetra dia haingana dia haingana ny orinasa. Ny mpanjifanay dia avy any an-toerana sy any ampitan-dranomasina, tilikambo an'arivony maro no natolotra ny mpanjifa ary ampiharina Sina, Sodana ary firenena maro hafa.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny varotra ataontsika, ny fahaizan'ny famokarana dia tsy afaka mamaly ny fangatahan'ny mpanjifanay. Raha jerena ny fanitarana ny tsena dia nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny orinasa hampiasa vola 20 000 000 USD hananganana tranobe sy zavamaniry vaovao.
Ny tetikasa dia namboarina tamin'ny dingana roa. Amin'ny dingana voalohany, 4500 m2 zavamaniry sy trano birao 5 rihana no hatsangana. Hatao amin'ny taona 2021. Amin'ny dingana faharoa, 3000 m hafa2 haorina ny zavamaniry Hanomboka hanorina amin'ny taona 2023. Rehefa vita ny tetikasa dia mahatratra 50.000 taonina isan-taona ny fahaizan'ny vokatra.
Ao amin'ny orinasa
Fotoana fandefasana: Mey-06-2020